Laptọọpụ inch 14 kacha mma nke 2022 nke ị ga-ahọrọ?
Laptọọpụ ọkọlọtọ ọkọlọtọ bụ nke nwere ihuenyo inch 15, ọkachasị 15.6 ″. Enwere ụfọdụ ndị buru ibu maka ndị chọrọ ịhụ ọdịnaya na mpaghara buru ibu, mana enwerekwa ndị pere mpe nke isi ihe kpatara ya bụ ngagharị ha. N'ime kọmpụta ndị a pere mpe, enwere ụfọdụ nwere ihuenyo inch 10 nwere oke, mana ọ bụrụ na anyị chọrọ ihe dị ike karịa, ọ bara uru ịzụrụ. 14 nke anụ ọhịa ahụ laptọọpụ.
Ọtụtụ n'ime obere laptọọpụ na ahịa, ma ọ bụ kama nke ahụ, laptọọpụ ndị dị mfe dị mfe na ahịa nwere ihuenyo nke dị n'etiti sentimita 13 na 14. Ogo ya na-enye anyị ohere iburu ha n'ebe ọ bụla, ma gụnyekwara ihe ndị nwere ogo ogo nke anyị nwere ike iji rụọ ọrụ ọ bụla na-enweghị njedebe ọ bụla. N'isiokwu a, anyị na-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara kọmputa 14-inch.
1 Laptọọpụ inch 14 kacha mma
2 Laptọọpụ inch 14, nke zuru oke maka ndị na-achọ:
2.1 Ọnụahịa mma
2.4 Ubé ibu ihuenyo
3 Ụdị laptọọpụ inch 14 kacha elu
4 Nleta nke laptọọpụ inch 14
5 Laptọọpụ dị inch 14 pere mpe?
6 13 inch ma ọ bụ 14 inch laptọọpụ?
7 14 inch vs 15,6 laptọọpụ
7.1 14 sentimita
7.2 15.6 sentimita
8 Ebe ị ga-azụta laptọọpụ inch 14 dị ọnụ ala
Laptọọpụ inch 14 kacha mma
HP 14-dk0017ns bụ akwụkwọ ndetu nke 14 sentimita maka ndị na-achọ ọrụ kachasị mma na ngwá ọrụ ọkụ na-enweghị iji ego buru ibu. Ọ pụtara maka ịgụnye ihe ndị dị ike, dị ka AMD Ryzen 7 processor, 8GB nke RAM na draịvụ ike SSD, 256GB na nke a, nke anyị nwere ike ime ihe ọ bụla na mmiri na ọsọ.
Ihuenyo nwere Full HD mkpebi, ihe na, ozugbo ị nwara ya, ị gaghịzi eji ihe ọ bụla dị ntakịrị. Na mgbakwunye na onyonyo a, kaadị eserese ya raara onwe ya nye AMD Radeon RX Vega 10 na-emesi anyị obi ike na anyị nwekwara ike ibugharị ọtụtụ egwuregwu vidiyo na-enweghị nnukwu nsogbu.
Sistemụ arụmọrụ nke akụrụngwa a na-abịa bụ Windows 10 Home na ọnụ ahịa ya, ihe ijuanya maka nkọwapụta ya erughị € 700, inwe ike nweta ya. na ụfọdụ ụlọ ahịa pụrụ iche maka ihe na-erughị € 600.
All Lenovo Ideapads na-enye ezigbo uru maka ego, ọ bụ ezie na n'ọtụtụ ọnọdụ àgwà na-adaba ntakịrị ka ọnụahịa ahụ nwee ike ịdaba nke ukwuu. N'ihe banyere C340-14, ihe kachasị adalata bụ ọnụahịa, na-ejigide ihe ndị dị n'ime ya na-eme ka anyị nwee ike ịrụ ọrụ na ụfọdụ mmiri na nkwụsi ike. Ma ọ bụ na anyị nwere ike nweta Ideapad a maka ihe karịrị € 600, nke bụ ihe ijuanya maka nkọwapụta ọ gụnyere.
Nke a Ideapad abụghị kọmputa nkịtị, kama kama ọ bụ onye na-agbanwe agbanwe. Ihe ntụgharị bụ kọmpụta nke enwere ike iji dị ka laptọọpụ ma ọ bụ mbadamba, yabụ na ọnụahịa gara aga, anyị ga-akwụ naanị otu nhọrọ ma anyị nwere ike ịsị na nke ọzọ na-abịa dị ka onyinye.
Banyere nkọwapụta ya kacha pụta ìhè, anyị nwere ihuenyo 14-inch Full HD, nke ike agwụghị m ịsị bụ nhọrọ na mgbe ị na-eji ya, ị chọghịkwa ihe ọ bụla na-erughị ya. AMD Ryzen 5 na diski SSD, 512GB na nke a, nke anyị ga-eji meghee ngwa ma ọ bụ faịlụ ọ bụla na ezigbo ọsọ yana 8GB nke RAM nke ga-enye anyị ohere ịrụ ọrụ na mfe. Obi abụọ adịghị ya, nhọrọ iji tụlee ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ihe dị mma, dị mma na ọnụ ala.
Ọ bụrụ na ị na-achọ laptọọpụ nwere ihuenyo 14-inch maka nkeonwe na nke ụbọchị ọ bụla, ọ ga-abụ na ihe ị na-achọ bụ ihe dị ka ASUS VivoBook Flip 14. N'etiti isi ihe nkiri ya anyị nwere ọnụ ahịa ya, dị n'okpuru € 600. na ukara ụlọ ahịa ma dị maka ihe € 450 ma ọ bụrụ na anyị achọ ya na ụfọdụ ụlọ ahịa dị n'ịntanetị.
VivoBook a abụghị nke kachasị ọsọ na klaasị ya, mana ọ naghị ekwu na ọ bụ ya. N'ime nkọwa ya, anyị nwere ihuenyo Full HD, nke m ga-asị na ọ bụ otu n'ime isi ihe dị egwu, ihe nhazi Intel i3, 8GB nke RAM na 256GB nke SSD ike, nke zuru oke ịkwaga Windows 10 sistemụ arụmọrụ arụnyere na ndabara.
ASUS ZenBook 14 bụ laptọọpụ anyị nwere ike iji ma maka ojiji nkeonwe yana maka ụfọdụ ọrụ. Ihuenyo zuru ezu nke anụ ọhịa 14 nke HD ga-enye anyị ohere ịhụ ihe niile a na-eme na ezigbo mma, nke mere na ozugbo ịnwale ya (FHD) ị gaghị eche maka ihe ọ bụla ọzọ.
N'ime, Windows 10 arụnyere na ndabara ga-eme ka onye nrụpụta ga-ebugharị ya Intel i5, 8GB nke RAM na draịvụ ike SSD, 512 na nke a. Ọ na-agụnye kaadị eserese Intel UHD raara onwe ya nye, nke ga-eme ka arụmọrụ dịkwuo mma mgbe anyị na-arụ ọrụ ụfọdụ ma ọ bụ na-arụ ọrụ na ngwanrọ chọrọ ya.
Anyị nwere ike nweta ZenBook a site na ASUS maka ọnụ ahịa ihe karịrị € 700 Ọ dịkwa na Intel i7 / AMD Ryzen 7 processor, ruo 32GB nke RAM, 512 SSD na kaadị eserese ka mma.
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na kọmpụta nwere ihuenyo nha kwesịrị ekwesị yana ọnụ ahịa dị obere ka enwere ike, ị ga-elele MEDION S4403. Isi ihe na-adọrọ mmasị ya bụ ọnụ ahịa ya, nke ahụ bụ na anyị nwere ike nweta ya erughị than 500. Ọ bụ ọnụ ahịa dị ala nke na ruo n'oge na-adịbeghị anya, ọ bụ karịa ma ọ bụ karịa ihe kọmpụta nwere ihuenyo 10.1-inch bara uru, MEDION a nwekwara ihuenyo 14-inch.
Medion S4403 - Enwere ike ibugharị ...
Maka nkọwa ndị ọzọ, nke e kwuru n'elu Ihuenyo 14-inch bụ Full HD, nke na-aghọ ọkọlọtọ kacha nta n'ihi na ọ na-enye ezigbo mma na, ozugbo anyị nwara ya, anyị achọghịzi ihe ọ bụla dị ala. Maka ihe ọ bụla ọzọ, ọ gụnyere ihe ndị pụrụ iche na rụrụ arụ, dị ka ihe nrụpụta Intel Core i3, 4GB nke RAM, na 128GB nke nchekwa SSD.
Sistemu arụ ọrụ na-abịa arụnyere na ndabara bụ a Windows 10 nke ga-eji nwayọọ nwayọọ na-agagharị, ma ọ bụ ihe a na-akwụ ụgwọ site na ọnụ ala dị ala na ihuenyo dị mma.
Laptọọpụ inch 14, nke zuru oke maka ndị na-achọ:
Emebeghị laptọọpụ inch 14 maka ndị ọrụ chọrọ. Ọ bụ ezie na e nwere ụfọdụ ndị dị ike n'ezie, a haziri ha iji nye ezigbo agagharị na ngwaọrụ ihe mgbaze, nke pụtara na ha bara ezigbo uru maka ego. Mbelata ihuenyo na-egosipụta na mbelata ọnụahịa mana, ọ bụ ezie na ha na-adịkarị obere ike karịa ụmụnne ha ndị tọrọ, ọ dịghị egosipụta nke ukwuu na akụkụ ya ime
Laptọọpụ 14-inch buru ibu nke ukwuu nke na anyị nwere ike dabara na akụrụngwa kachasị mma n'ime ha, nke gụnyere ezigbo processors, ezigbo RAM, draịva siri ike kacha mma na batrị ọkara, nke na-enye ha ikike nnwere onwe. Ya mere, ha bụ ezigbo nhọrọ ma ọ bụrụ na ihe anyị chọrọ bụ a ezigbo laptọọpụ maka ọnụ ahịa dịtụ ala, icheta na ihuenyo gị ga-adị ntakịrị karịa nha ọkọlọtọ (15.6 ″).
Ọ bụ ezie na ọ ga-adabere na akụrụngwa a họọrọ, kọmputa 14-inch na-enye ezigbo arụmọrụ. Dị ka anyị kọwara na isi ihe gara aga, ha dị ntakịrị, ma ha abụghị nke ukwuu na ndị nrụpụta ga-egbutu ọtụtụ nkọwa. Ya mere, enwere nhọrọ nke nwere ezigbo nhazi, RAM, na ihe ndị ọzọ dị ka kaadị eserese. N'aka nke ọzọ, ụfọdụ nwere, na mgbakwunye na obere ihuenyo, mkpebi dị ala, nke na-eme ka ọ dị ọkụ na "engine" nke otu ahụ nwere ike ilekwasị anya na usoro ndị dị mkpa n'ezie.
Kọmputa 14-inch dị Mkpa ọkụ karịa sentimita 15.6, nke bụ nha ọkọlọtọ maka akwụkwọ ndetu. Nke a bụ ihe mgbagha na-agwa anyị, na ihe niile hà nhata ma ọ bụ na otu imewe na Ẹkot components, ndị kasị nta ga-atụ obere. Na mgbakwunye na ibu, nha ga-emekwa ka ọ dị mfe ibufe na ọ dị mfe ịbanye na akpa azụ ma ọ bụ obere akpa ọ bụla karịa laptọọpụ nke dị ihe dị ka sentimita 2 karịa diagonally.
Ọtụtụ laptọọpụ ndị a maara dị ka Ultrabooks nwere ihuenyo dị n'etiti 13 na 14 inch. Laptọọpụ ndị a nwere ịdị arọ nke na-adịkarị n'okpuru 1.5kg, mana e nwere ndị na-eru ihe na-erughị otu kilogram. Ọ bụrụ na anyị ga-ebugharị ya mgbe niile, anyị nwere mmasị na laptọọpụ inch 14 karịa nke ọkọlọtọ.
Ubé ibu ihuenyo
Ee, Laptọọpụ inch 14 nwere ihuenyo dịtụ ukwuu n'ihi na, n'eziokwu, ha na-abụkarị laptọọpụ nke ha tinyeworo na ya. 14 inch n'ogo ha ji etinye inch iri na atọ. Nke a ekwe omume n'ihi mbelata nke okpokolo agba: ugbu a, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kọmpụta ọ bụla dị n'ahịa nwere okpokolo agba na-erughị otu centimita n'akụkụ nke ọ bụla, ikekwe abụọ n'akụkụ elu, mana tupu oke akụkụ ahụ buru ibu.
Ya mere, ọ ga-ekwe omume ịkwado ihuenyo buru ibu n'otu oghere, ịdị arọ na nha nke ha na-etinyebu ihuenyo otu inch dị ntakịrị.
Ụdị laptọọpụ inch 14 kacha elu
HP bụ ụlọ ọrụ malitere inweta ewu ewu maka ndị na-ebi akwụkwọ ya, mana ugbu a bụ ụlọ ọrụ mba dị iche iche nke raara nye teknụzụ ozi.
Ọtụtụ afọ gara aga, o kere laptọọpụ na bọtịnụ mgbakwunye nke ọtụtụ na-amasịghị, ma taa ọ bụ otu n'ime nhọrọ kachasị mma mgbe ị na-achọ ịzụta kọmputa ọhụrụ. Na katalọgụ ya anyị ga-ahụ ụdị kọmpụta niile, N'ime nke anyị ga-enwe 14 inch nke àgwà dị ka nke Ngalaba Pavilion.
Lenovo bụ ụlọ ọrụ teknụzụ izugbe dabere na Beijing, China. Dị ka ndị na-emepụta ihe na mba Eshia, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile ha na-enye ha na-eme na ọnụ ahịa dị mma, nke na-apụtaghị mgbe niile na ọ bụ nke nwere oke ego.
N'ime katalọgụ ya, anyị ga-ahụ laptops nke ụdị niile, dị ka ụfọdụ laptọọpụ inch 14 na-adọrọ mmasị dị ka ndị dị na ya Usoro Ideapad, ọ bụ ezie na n'otu usoro ahụ, anyị ga-ahụkwa ngwá ọrụ nwere ihuenyo buru ibu na nke nta.
ASUS bụ ụlọ ọrụ Taiwanese nke raara onwe ya nye ngwá electronic na robotics, mana ọ bụrụ na ha enwetala ụfọdụ ewu ewu maka ihe, ọ bụ n'ihi na ha bụkwa ndị ọkachamara na ngwaike.
N'ime ngwaike ya, anyị na-ahụ kọmpụta dị iche iche, dị ka ụfọdụ laptọọpụ inch 14 anyị nwere ike ịhụ na ha. VivoBook na usoro ZenBook. Ha na-eme kọmpụta dị mma, nke mere na ụfọdụ na-emegide ọbụna Apple pụrụ ime ihe nile.
Nleta nke laptọọpụ inch 14
na Ihuenyo 14 inch Ha dị 35,56 cm diagonal, ya bụ, site na akuku aka ekpe nke ala ruo n'akụkụ aka nri elu. Dabere n'akụkụ akụkụ (oke nke obosara na ịdị elu nke ihuenyo), ọ nwere ike ibu ma ọ bụ obere.
Dịka ọmụmaatụ, otu n'ime oke kachasị ewu ewu, 16: 9, ga-ahapụ akụkụ dị ka 31 × 17 cm (obosara na ịdị elu). Agbanyeghị, na nke a, anyị kwesịkwara ịgbakwunye nha nke etiti ahụ nwere, ma ọ bụrụ na ọ bụghị laptọọpụ na-enweghị etiti ma ọ bụ nwere ihuenyo enweghị ngwụcha, nke na-enwekarị nke a ma ọ bụ nke ga-eburu naanị milimita ole na ole.
Laptọọpụ dị inch 14 pere mpe?
Un 14 nke anụ ọhịa ahụ laptọọpụ ọ bụ kọmpat, ọ bụ ezie na ọ bụ ọrụ na-arụ ọrụ nke ọma, n'etiti 15.6 "na 13", na-enweta ihe kachasị mma nke ụwa abụọ n'otu ngwaọrụ. Laptọọpụ ndị a nwere ike ịdị mma maka:
Kọmpat na obere arọ, maka ndị na-achọ ka mma ngagharị. Na mgbakwunye, site n'inwe obere ihuenyo, ọ ga-achọkwa obere ume iji rụọ ọrụ, nke pụtara nnwere onwe ka ukwuu. Dịka ọmụmaatụ, ọ nwere ike ịdị mma maka ụmụ akwụkwọ ndị ga-ebu ya na akpa azụ ha, ndị ọkachamara nke arụ ọrụ anaghị edozi, wdg.
Ha nwere ike inye gị ohere ịnweta akụrụngwa dị mma ka ị nwee ike ijikọ ya na ihuenyo mpụga maka ọrụ gị ma ọ bụrụ na ịchọrọ elu karịa, na-egosighi na ị ga-ebufe ngwa ngwa buru ibu maka iji ihuenyo mpụga.
Ọnụahịa akụrụngwa nwere obere ihuenyo na-adịkarị mma.
13 inch ma ọ bụ 14 inch laptọọpụ?
Ihe dị mma banyere ogwe ọhụrụ ahụ bụ na ha nwere ike ịha nhata na nha 13-inch, ebe ọ bụ na ya. ihuenyo enweghị ngwụcha, ma ọ bụ enweghị okpokolo agba, ma ọ bụ ndị e wedara ala, jisiri ike mejupụta akwụkwọ ndetu ndị a karịa. Ya mere, ị nwere ike ịnwe otu mmegharị ahụ dị ka nke nwere 13, mana na-enwekwu inch nke na-adịghị ewute ikiri vidiyo, gụọ, ma ọ bụ rụọ ọrụ ndị ọzọ ebe ịchọrọ ntakịrị ọrụ.
Naanị uru nke laptọọpụ nke 13 sentimita bụ na oriri ya dị ntakịrị ala, na-eme ka batrị dị ogologo karịa, mana ha nwere ike ghara iru ala n'ihi obere nha ha.
14 inch vs 15,6 laptọọpụ
14 sentimita asatọ dị n'etiti 13 na 15 sentimita, nke pụtara a mma imebi n'etiti size na ngagharị. Kama, enwere ọnọdụ ụfọdụ ịhọrọ laptọọpụ inch 14 nwere ike ịka mma:
Nha ziri ezi.
Oriri ala, yabụ ọ ga-agbatị ndụ batrị.
Nwere ike ịdị ntakịrị maka ụfọdụ ọrụ.
Ịdị nta ga-ahapụ obere ohere maka imewe na ngwaike.
Nha buru ibu, yabụ ọ nwere ike ịka mma maka ikiri vidiyo, nkwanye ugwu, ide ihe, ịgụ akwụkwọ, ma ọ bụ egwuregwu vidiyo.
N'ịbụ ndị buru ibu, nke ahụ na-eme ka chassis nke laptọọpụ na-eto eto, nke ga-enye ya ohere ịnweta ohere maka usoro nju oyi ka mma, oghere n'efu maka mgbatị, ma ọ bụ ihe ndị dị ike karị.
Ọnụ ahịa dị elu.
Oriri batrị karịa.
Arọ na nha karịa.
Ebe ị ga-azụta laptọọpụ inch 14 dị ọnụ ala
N'ikpeazụ, ọ bụrụ na ị na-agbalị ịzụta a Laptọọpụ inch 14 n'ọnụ ahịa dị mma, ị nwere ike zụta ya n'ebe a na-ere ahịa:
Amazon- Usoro njikwa ahịa n'ịntanetị juputara na laptọọpụ nke ihe niile, ụdị na nha, gụnyere nke inch 14. Na mgbakwunye, ọ nwere ọtụtụ ndị nkesa na-ere site na webụsaịtị a, na-eme ka o kwe omume ịchọta ọtụtụ onyinye dị iche iche maka otu ngwaahịa ahụ. N'aka nke ọzọ, ị ga-amarakwa na ọ bụ a pụrụ ịdabere na, n'elu ikpo okwu echekwabara na niile nkwa. Ọ bụrụ na ị bụ onye ahịa Prime, ị nwere ike tinye iwu gị na-enweghị ụgwọ mbupu ma ọ ga-abịa ngwa ngwa.
Ụlọikpe Bekee: akara Spanish nwekwara nhọrọ dị mma nke akụrụngwa ị nwere ike ịhụ na ngalaba eletrọnịkị na teknụzụ nke ebe ndị a. Na mgbakwunye, ị nwekwara ike ịtụ ya na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị ya ma ọ bụrụ na ịnweghị ụlọ ahịa dị nso ma ọ bụ na ị chọghị ịga njem. N'ọnọdụ ọ bụla, ọ bụghị ebe nwere ọnụ ahịa kacha mma, mana ị nwere ike ịtụ anya nkwalite na ego dị ka nke Tecnoprecios.
nrutu: nke a ọzọ yinye nke French center nwekwara ezigbo repertoire nke laptọọpụ si na isi ụdị na ọhụrụ ụdị ulo oru. Ị nwere ike ịga ebe ịre ahịa kacha nso maka ịzụrụ ya n'onwe gị ma ọ bụ rịọ ya site na ikpo okwu webụ ha ka iziga ya n'ụlọ gị. Dị ka nke gara aga, ọnụ ahịa nwere ike ọ gaghị abụ nke kachasị mma, mana enwere ụfọdụ nkwalite na onyinye nwere ike ịmasị gị.
mediamarkt: Agbụ nke ọzọ nke ụlọ ahịa teknụzụ German nwere ọnụ ahịa dị mma, yana ụdị laptọọpụ inch 14 kachasị ọhụrụ sitere na ụdị ndị a ma ama. Ọzọ ị nwere ike ịhọrọ n'etiti ịzụrụ n'ụlọ ahịa ya ọ bụla, ma ọ bụ ọnọdụ ịntanetị, dịka ọ dabara gị.
Laptọọpụ dị ọnụ ala » Size » Laptop 14 inch